Cable Mabhokisi Uye maConnectors
Yakadzika Voltage ABC Shongedzo
Kuchengetedza Kuboora Kubatanidza
Pre-insulated Lug Uye Sleeve
Fiber Optic Cable zvishongedzo
Kumusoro Mutsetse Kukodzera
Iron Line Yakakodzera
Pakati Pakati Voltage Zvinosunga
Kupisa Shrinkable Uye Silicon Rubber Zvishongedzo
Kupisa Shrinkable accessories
Silicon Rubber Zvishongedzo
Mheni inosunga, Fuse cutout uye Insulator
Wiring zvishongedzo Uye Zviteshi
Solar Farm-Yakareruka trunk tambo dhizaini inogonesa kuisa uye inoderedza mutengo wese
Mumakore achangopfuura, kudiwa kwesimba rezuva kwakura seimwe nzira yakasvibirira kune yechinyakare fossil peturu-yakavakirwa magetsi, uye maitiro ezvekugadzira magetsi ezuva ave achienda kune masisitimu ane zvese zvakakura tsoka uye hukuru hwekugadzira kugona. Nekudaro, sesimba ...
Super stock icon: mune yakanakisa mota muNHRA [uye Chevrolet] nhoroondo!
Dan Fletcher (Dan Fletcher) ndomumwe wevanhu vatatu munhoroondo yekumhanyisa mujaho. Akakunda zvinopfuura zana kukunda kweNHRA, achimuisa pamberi pengano zhinji mumutambo uyu, uye kukwikwidzana naJohn Force naFrank Manzo (Frank Manzo) vakave kirabhu yakasarudzika. Ndiye chete akatsvaira ...
Wepamusoro makiyi vatambi mune yakadzama ongororo yeiyo tambo uye yekubatanidza musika pasirese pasiti
"Iyo tambo uye yekubatanidza misika yekutsvagisa tsvakiridzo inopa kuongororwa kwakazara kwetambo uye yekubatanidza musika, iyo inosanganisira chokwadi, kufunga kwakadzama, nhoroondo yezvakaitika, uye inotsigirwa nhamba uye neruzivo-rwunoratidzwa neindasitiri ruzivo. Iyo tambo uye yekubatanidza musika kuongororwa zvakare mu ...
Chii chinonzi Dead-End Grip?
Yekufa-yekupedzisira kubata irwo rudzi rwepoloni mutsetse Hardware iyo inobatana kune ziso thimbles pane pole mitsara uye yekutaurirana mitsara. Vane dhizaini inobvumidza kutapurirana pane maantena, mitsara yekufambisa, mitsara yekutaurirana, uye zvimwe zvimiro zvevakomana. Izvo zvinoshandiswa nevagadziri mu ...
Iyo yekumanikidza kiramba ndeimwe mhando yeasina kukakavara Hardware fittings, inowanzo shandiswa pane yepamusoro misoro yekufambisa kana mitsara yekuparadzira. Iyo tension clamp inonzi zvakare yakafa magumo strain kiramba kana quadrant strain kiramba, ndeimwe yemhando yekutapurirana mutsetse kusungisa. Nekuti chimiro chegumi ...
Kumiswa kiramba kunodaidzwa zvakare kunzi kumisa kumisa kana kusimisa kukodzera. Zvinoenderana nechishandiswa, Suspension kiramba inosanganisira kuturika kambo yeABC tambo, kuturika kiramba yeADSS tambo, kuturika kambo kune wepamusoro mutsetse. Suspension kiramba ndeyekutaura kwakawanda kwese kwese kirinda whi ...
Socket Clevis: Yekupedzisira Gwara revanounza kunze
Chii chinonzi Socket Clevis? Socket clevis inozivikanwa zvakare socket rurimi chinhu chakakosha kwazvo cheiyo pole mutsara tekinoroji. Inowanzo shandiswa pamisoro yepamusoro, mitsara yekufambisa, uye tambo dzemagetsi. Icho chikamu chakakura mudanda mutsetse Hardware iyo inowanzo kubatanidza iyo socket mhando insulato ...
Chii chinonzi Guy Thimble yePole Line Hardware
Guy thimble ipanda mutsara Hardware yakagadzirirwa kushandiswa pamapandi mabhandi. Ivo vanoshanda seyunifomu inoshandiswa kubatanidza mukomana waya kana mukomana kubata. Izvi zvakajairika pane akafa magumo pole mitsara uye magetsi magetsi tambo. Kunze kwekushandisa kwataurwa pamusoro, mukomana thimble anobatanidza tambo yekumanikidza kuchengetedza ...
Fekitori kutangazve chiziviso cheYONGJIU.
ne admin pane 20-03-23
YONGJIU Magetsi SIMBA kukodzera CO., LTD atangazve zvakajairika kugadzirwa. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kundibata kana uine chero chinodiwa pamusoro pechigadzirwa chedu seinotevera.
ZVAUNOFANIRA KUZIVA PAMUSORO POKUDZIVIRIRA KWETSVONDO CHIRWERE CORONAVIRUS (COVID-19)
Kune kuputika kwepasi rose kwecorona virus panguva ino. Hutachiona uhwu hungangopararira kuburikidza nekukosora, kuhotsira kana kumwe kusangana nemate. Iyi inotevera nzira inodikanwa munguva yedenda Ndokumbirawo udzikise zviitiko zvekunze zvakanyanya se po ...
Nhungamiro yekumisikidza kuputira kuboora chinongedzo
Insulation Piercing Connector (IPC) inoshandiswa kubatanidza yakaderera-voltage yakamonyaniswa-peya tambo ine yakaderera-voltage yakamonyaniswa-peya kana yakaderera-magetsi insulated tambo (yemhangura kana aluminium tambo) pasina kubvisa kuputira kwetambo. Tinogona kudzidza nzira yakapusa yekumisikidza kubva pamufananidzo unotevera.
Runhare: +86 577 6178 7888
Runhare / Whatsapp: +86 18057751088
Kero: Jiaxi Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing Guta, Zhejiang Province, China
Cable Clamp, Simba Cable Clamp, Wire Clamp, Aluminium Cable Clamp, Aluminium Electric Clamp, Magetsi Makira,